November 2016 – Ministry of Education in Puntland
Shirkii 3aad oo Dib u eegista Waxbarashada Puntland oo ka furmay Magalada Garowe.
29/11/2016- Madaxweyne kuxigeenka Dowlada Puntland Ahna kusimaha Madaxweynaha Eng Cabdixakiin Cabdulaahi Camay ayaa maanta ku daahfuray magaalada Garoowe shirweynaha 3-aad ee dib u eegista Waxbarashada Puntland. Shirkan oo sanad walba […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Tababar u soo xirtay 43 Macalin oo kala yimi Gobolada Abaartu Samaysay Sanadkii hore.
24/11/2015- Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Tababar u soo xirtay 43 Macalimiin oo Ka kala Yimi Deegaanada fog fog ee Puntland oo Abaartu Samayasay Dugsiyadooda. Waxaa Maanta Hoolka Wasaaradda […]
Waaxda Hormarinta Waxbarashada Gabdhaha oo Tabarbar u furtay Kormeerayasha iyo xiriiriyeysha Gabdhaha Gobolada Waxbarsahada.
21/11/2016- Waxaa maanta oo isniin ah hoolka shirarka Hotel New Rays ka furmay tababar socon doono mudo saddex cisho ah oo salka ku hayo sidii kor loogu qaadi lahaa heerka […]
Wasiir-ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ugu baaqay ardayda iyo bahda Waxbarshada puntland inay abaaraha ka qayb qaatan.
15/11/2016- Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare Dr Mohamed cali faarax iyo xubno kamid ah gudiga abaaraha Waxbarashada maxamed Jaamac yusuf tigay ayaa saaka ardayda Dugsiyada sare ee […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ku dhawaaqday Gurmad abaaraha ee dhamaan Goobaha Waxbarashada.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo kulan balaaran la qadatay Hay’adda World bank.
Daawo sawiradii Dugsiga sare imaamu shaafici, Gaarisa, Xaaji yaasiin, iyo Raas casayr iyo Cumar binu Abdisiis.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare iyo Hay’adda Care oo daah furay buugaag Dugsiyda sare ah.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda waxabarashada iyo Tacliinta sare oo kormeer ku sameyey iskuulada Boosaso maalintii 7aad.